Sida loo dajiyo Windows 10 Daawade Sawirrada Windows | War gadget
Miguel Hernández | | Software, Windows
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee Windows 10-ka cusub, maxaa diidaya in la dhaho, waa arjiga Sawirada, oo aad u gaabis ah marka la barbar dhigo Windows Photo Viewer oo nala wadaagayay sawiro sanado badan. Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo hubiyo in dhammaan sawiradeena ay ku furmaan Windows Photo Viewer Mana ahan barnaamijka Windows 10 Sawirada, haddii aad dabcan rabto.
Sidii aan horeyba u sheegnay, markii hore Windows 10 ayaan u qaabeynay si barnaamijka Windows Photos uu yahay kan furo sawiradeena, nasiib daro looma wanaajin sidii la rabay ama la jeclaan lahaa, Taasi waa sababta waxyaalaha qaarkood waqti kasta oo la soo dhaafay ay uga fiicnaayeen, gaar ahaan Daawadaha Sawirka Daaqada, aad u dhakhso badan, fudud oo waxtar leh, oo haddii wax shaqeeyaan, maxaad u beddeleysaa?
Waqtiga intiisa badan waxay noqon doontaa mid aad u fudud, iyo Windows 10 markaan furno sawir markii ugu horeysay waxay na weydiin doonaan barnaamijka ama arjiga aan dooneyno inaan ku furno faylasha noocaas ah kaliya dooro Windows Photo Viewer. Si kastaba ha noqotee, haddii sabab kasta aynaan u dooran xilligaas ama hadda aan beddelnay maskaxdeena ku saabsan arjiga Sawirada, waa inaan si fudud u raacnaa tallaabooyinka soo socda ee lagu sharraxay sawirka kore.
1 Dib u deji Windows 10 Sawir Qaade
2 Beddelka Windows 10 Sawir Qaadaha
Dib u deji Windows 10 Sawir Qaade
Waxaan riixnaa furaha Windows ama waxaan tagnaa sanduuqa qoraalka Cortana
Waxaan qori "codsiyada caadiga ah"
Codsiyada la soo jeediyay, guji «Dejimaha barnaamijka aasaasiga ah »
Waxaan galnaa qaabeynta oo waxaan dul marnaa qeybta «Sawirro»
Waxaan bedeleynaa arjiga Sawirada Windows Photo Viewer oo ka muuqan doona isla liistada
Sida aad u awooday inaad u fiirsato ku soo noqoshada daawadaha caadiga ah waa mid aad u fudud, waa inaan raacnaa talaabooyinkan oo haddii aad dhibaato leedahay, ha ka waaban inaad kala tashato faallooyinka. Noo sheeg, ma kula joogaysaa vWindows 10 sawir qaade Mise waxaad doorbideysaa sawir-qaadaha sawir-qaadaha ee qalliinka Microsoft?
Beddelka Windows 10 Sawir Qaadaha
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku jirnaa xilligii shakhsi ahaaneed, iyo sida aan u aragno sawirrada kombuyuutarkayaga ma yarayn karin, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan kuu soo qaadno wax aad u yar oo beddelaad ah oo loogu talagalay Windows Photo Viewer, si aan isugu dayno siyaabo kale oo aan ku helno waxqabadka iyo hagaajinta sida aan ugu aragno sawiradeena Windows 10 PC, dabcan. Marka waxaan halkaa ugu aadnay xoogaa yar oo beddelaadyo ah oo aadan tabi karin.
Barnaamijkan ugu horeeya wuxuu na siinayaa si fudud oo fudud oo macquul ah interface interface, kuwa aan dooneynin wax ka badan inay gujiyaan sawirada oo ay sii socdaan ma xuma wax dhan. Waad ku mahadsantahay isdhexgalkaan 'minimalist interface', wuxuu si dhakhso leh u socdaa, aad uga badan kan caadiga ah ee Windows 10 Photo Viewer. Taasi waa sababta kuwa jecel waxqabadka iyo fudeydku ay aad u joogaan.
Soo dejiso - SawirkaGlass
Barnaamijka caanka ah ee loo yaqaan 'XnView softwares lahaansho', oo si ballaaran ay u isticmaalaan isticmaaleyaasha u heellan wax ka beddelka sawir qaab xirfadle ah. Sawir qaadahaani wuxuu noo ogolaanayaa inaan xallino cilladaha yar yar ee caamka ah ee sawirro badan, sidaa darteed wuxuu ku noqdaa tifaftire fudud qaab. Dhinaca kale, is waafajinteeda ballaadhan ee qaababka muuqaalka kala duwan ayaa waliba ka dhigtay mid aad caan u ah.
Soo dejiso - XnShell
Wax aad ula mid ah wixii aan hore kuugu sheegnay ee leh 'ImageGlass', sababta ay u tahay waa xawaaraha iyo xawaaraha isticmaalka. Isku xirnaanta adeegsigeeda ayaa laga yaabaa inay tahay mid aad u fudud oo aan bixinayn macluumaad badan, laakiin waxay leedahay afarta ikhtiyaar ee aasaasiga ah ee isticmaale kasta ogyahay sida loo isticmaalo, isagoon ku faanin laakiin dhagaystayaasha oo dhan.
Soo dejiso - IrfanView
Minimalism oo leh interface isticmaale kaas oo si dhakhso leh noo xusuusin doona Mac OS X hore ama Linux hadda. Mar labaad waxaan haynaa waxyaabo kale oo fudud, oo waliba noo oggolaan doona inaan aragno GIF-yada firfircoon, iyo waxyaabo kale, sidaas moodada maanta.
Soo dejiso - Muuqaal
Ma ogtahay midna Windows 10 sawir qaade taas oo u adeegta beddelka nidaamka rasmiga ah ee Microsoft? Midkee noo sheeg?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Windows 10 sawir qaade
Hagaag, Windows 10-kayga ikhtiyaarka "Windows Photos Viewer" ma muuqdo, kaliya "Sawirro" ayaa soo muuqda (taas oo ah fikirka xun ee cusub ee Microsoft) iyo ikhtiyaarka bakhaarka.
Ku jawaab gueben
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga oo ah gueben, ikhtiyaarkan ma muuqdo iyo in codsiga daaqadaha sawirku yahay qashin: /
Jawaab Jose Chacón
Qalabyada nadiifka ah doorashadan lama dhaqaajin karo.
Ujawaab Abeluccio Hds
Waxaan helayaa ikhtiyaarka "Windows Photo Viewer", laakiin waxay kaliya ii ogolaaneysaa inaan isku xiro qaabka faylka TIF. Taasi Microsoft maahan inay marwalba sameyso mid u gaar ah (arag badhanka badinta 8). Iyada oo sida wanaagsan ee daawadeyaasha Windows ay ahaan jireen.
Ku jawaab vissentico
Hal qayb oo ka mid ah Wallyz Prod INC dijo
Daawade Sawir-qaade Windows iima muuqdo. Meel walba waan ka raadiyey. Iyo wixii aad ku sharaxday ee ku saabsan sida loo beddelo arjiga asalka ah, Sawirradu kuma muuqdaan liiska qaabeynta sidoo kale
Jawaab Wallyz Prod INC
Isla waxbaa igu dhaca aniga: ikhtiyaarka Windows Photo Viewer ma muuqdo. 🙁
Ku jawaab MNC
Hagaag, ka soo horjeedka ayaa igu dhaca. Waxaan hayaa kumbuyuutarka 3 qof oo adeegsada midkoodna daaqadaha 10 "sawirro" waa la waayey, sidoo kale waxaa laga waayey liiska barnaamijyada bilowga, taa badalkeed faylalka horey loogu furay "sawirrada" waxaa lala xiriirinayey twinui, dabcan ma furi karo mana heli karo. Isticmaaluhu wuxuu leeyahay waxba kama aysan beddelin, fayrasku waxba ma helo (kasper) mana aqaan meel aan ka raadsado cusbooneysiinta barnaamijyada, (oo u muuqda kuwa kale ee isticmaala inta badan) sababtaan darteed ayaan meesha uga saaray ka soo degsashada dukaanka, mar horeba ma jecli inaan dhigo barnaamijyo isku mid ah, si aysan dhibaato u siin. Waxaa la iisoo jiiday inaan dib ugu soo celiyo dhibic hore, laakiin inta kale ee isticmaaleyaashu wax dhibaato ah ma siinayaan. Markaa haddii qofna wax garanayo, waad ku mahadsan tahay hore wadashaqayntaada.
Ku jawaab pepemax
Waad salaaman tihiin, aad baad u mahadsan tihiin, waad i caawiseen wax badan iyo aniga oo aan haysan wax badan oo boodh ah
Jawaab maria elena
Mahad badan. Aad ayey iigu adeegtay 🙂
Ku jawaab Gianni
Aad baad u mahadsantahay, waxaad tahay dildilaac
Ku jawaab si aad uhesho
Mahadsanid, bilyan mahadsanid.
In Windows 10 waxay joojisay inay si sax ah u shaqeyso, waxay kuu ogolaaneysaa inaad aragto hal sawir oo kuu oggolaan maayo inaad u socoto tan xigta. waa inaad gasho ama kabaxdo si aad kuwa kale u aragto …… xun.
Ku jawaab malbarmad
Waxaan hayaa codsi ikhtiyaar u leh inuu furo dukumiintiyada macmiilka. Waxay si fiican ugu shaqeysaa Windows 7 laakiin markii loo beddelayo Windows 10 waxa la sameeyo si loo raaco isla shaqeynta, waa inaad la qabsataa maktabadaha ama doorbidayaa daawadayaasha asalka ah ee Windows 10.
Ku jawaab Carlos Ramirez
Sidee looga soo kabtaa… ??? »» sawir qaade Windows ah »maxaa yeelay windows 10 aad ayey u xun yihiin» »»
Qofka wax daawanayaa iima muuqdo aniga oo ma jiro wax xal ah oo suurtagal ah oo la raaco talaabooyinkan.
Waxaan ka helay jidka meel kale waana iyada oo wax laga beddelo diiwaanka. Waxaan kaaga tagayaa isku xidhka
Waan ogolaadaa naftayda laakiin markaan furo sawirada waxay soo baxayaan midab dhalaalaya oo dhalaalaya, casaanku wuxuu u muuqdaa mid casaan ah, ma jiraa qof og xal mahadsanid
Ku jawaab Juanny
Ciyaaraha kubada cagta ma jeceshahay? Kani waa daabacaadda 'DualShock PlayStation FC'